Zọpụtara foto izizi nke OPPO Chọta Z nke gosipụtara atụmatụ ya | Gam akporosis
OPPO bụ otu n'ime ụdị ọrụ kachasị arụ ọrụ n'afọ a, na ekele maka akụkụ Reno ya, nke ha nwere olile anya na ha ga-enwerịrị ọnụnọ na Europe. Ihe bụ ihe ọzọ, Akara ndị China na-arụ ọrụ ọhụrụ ya bụ OPPO Find Z. Ọ bụ onye nọchiri Find the X, nke bidokwara na Spen ọ kwụpụtara maka imepụta mbụ na ịnwe ụgwọ kachasị ọsọ na ahịa. Yabụ enwere mmasị na ekwentị ọhụrụ a.
Foto izizi nke OPPO Find Z adịlarị mbụ. Ekele ha nwere anyị nwere ike ịhụ nhazi nke njedebe a nke akara ndị China ga-enwe. Photosfọdụ foto na-eme ka o doo anya na ụlọ ọrụ ahụ kwadoro siri ike na mbido mbụ nke dị iche na ekwentị ndị ọzọ dị n'ahịa ugbu a.
Nhazi nke OPPO Find Z dị iche na ekwentị afọ gara aga, ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ihe yiri ya n'okwu a. Na azụ anyị na-ahụ udi V ọzọ, ọ bụ ezie na ọ na - eme ihe ike karịa ụdị nke gara aga na nke a. Anyị nwekwara ike ịhụ nke ahụ ngwaọrụ ga-enwe igwefoto azụ abụọ. Ezie na n'ihu ga-abịa na a eji usoro.
Akara ndị China na-ahapụ anyị n'ụzọ dị otú a imewe yiri nke afọ gara aga, ma na nke anyị nwekwara usoro mgbanwe, dịka enwere ike ịtụ anya ya. N'oge ahụ, anyị enweghị ozi gbasara nkọwa ndị ọhụụ a ga-ahapụ anyị.
Na mgbe OPPO Find Z a ga-abata n’ahịa enweghị ozi ọ bụla. Ikpeazụ afọ-elu-ọgwụgwụ bịarutere n'ọnwa ikpeazụ nke afọ, ya mere afọ a yiri ka ọ ga-adị ka nke a. Nkwupụta ọdịda na ntọhapụ oge ụfọdụ n'etiti ngwụsị ọdịda ma ọ bụ oge oyi.
N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-adị ara ntị na ozi ọma na-abịarute banyere OPPO Find Z. Ebe ọ bụ na akara ndị China nwere n'aka ya ngwaọrụ nke nwere ike ịmasị ọtụtụ ndị ọrụ. Na mgbakwunye na igosi na ha nwere ike ịnye ihe dị iche na njedebe dị elu ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ na gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nzacha ohuru nke ntụgharị nke OPPO Find Z
Black Shark 2 Pro bụ onye kacha ere ahịa na China